kbs — Wed, 12/30/2009 - 10:58
ऋतु वसन्तको थियो । लालीगुराँसहरू रातै भएर फुलेकाले नेपालका लेकाली पर्वतहरू पूरै राताम्य भएर रङ्गएिका थिए । पारि हरिया पहाडको छाती चिरेर बगेका सेता झरनाहरू मीठो सङ्गीतको धुनमा रमाउँदै तल कहाँ-कहाँ अनन्त गहिराइमा झरेजस्ता देखिन्थे । पहाडको फेदीमा नीलो पानीमा सेता छालहरू उराल्दै बेतलौरीजस्ता बाङ्गएिर नदीहरू बग्थे । रूखका डालीमा बसेर कोहो कोहो कोइली कराउँथ्यो ।
अति रमणीय, मनमोहक र त्यो स्निग्ध वातावरणमा ऊ एक्लै रमाइरहेको थियो ।
ऊ नेपाल भर्खरै आएको । उसको बसोबास विदेशमै भए पनि ऊ पटक-पटक नेपाल आउने गर्छ र ऊ अरूलाई नेपाली नै हुँ भन्ने गर्छ । नेपाल आउँदा नेपाली भेषभूषामै ठाँटिएर हिँड्ने उसलाई नेपाली भाषाको राम्रो ज्ञान छ । त्यसैले उसलाई देख्नेहरूले, भेट्नेहरूले र ऊसँग बोल्नेहरूले उसलाई विदेशी हो भन्नै सक्तैनन् ।
"अहा ! यो प्रकृतिको भरपुर मादकता, यो अलौकिकता आफैँसँग चोरेर लान पाए म कति भाग्यमानी र सुखी हुन्थेँ होला," उसले मनमनै कल्पना गर्यो ।
प्रकृतिको रमाइलो आँगनमा रमाइरहेको बेला कता-कता एउटा मीठो नारी स्वर उसले सुन्यो-
'माथि-माथि सैलुङ्गेमा चौँरी चराउनेलाई
हत्केलामा मायाको गुराँस फुलाउनेलाई'
त्यो सुन्दर नारी आवाजतिर असाध्यै लोभिएर ऊ बिस्तारै उतैतिर लाग्यो । चुल्ठामा रातो गुराँस सिउरिएर एउटी जवान युवती भेडा चराइरहेकी थिई । भेडाहरू चौरीमा निमग्न चरिरहेका थिए । ऊ भने अर्कै सुन्दर संसारमा निर्वाध उडिरहेकी थिई र उसले थाहै नपाई अनेक थरीका गीतका गेडाहरू उसका मुखबाट निस्किएर पूरै वातावरणलाई गुञ्जाएमान तुल्याइरहेका थिए ।
ऊ बिस्तारै त्यहीँ गयो जहाँ युवती थिई ।
रगत चुहिएलाजस्ता राता गाला, हावासँगै सुस्त फर्फराइरहेको कालो केश, लोभलाग्दा बाटुला आँखा, त्यो ओठको मोहिनी लालित्य, सुकसुकाउँदो र लहलह उसको कुमारी जोवन जो त्यही गुराँससँगै फक्रिरहेको थियो त्यो अनुपम जादुगरीले उसलाई लोभ्याउनसम्म लोभ्यायो ।
'अहा ! यो त स्वर्गकै परी रहिछ । यसलाई आफ्नी बनाउन पाए......।' उसको मनमा तृष्णा जाग्यो । त्यो एकान्त निर्जन ठाउँमा एउटा अनजान युवक छेउमा आएको देखेर युवती डराई र त्यहाँबाट उठ्न खोजी ।
"तिमी किन डराएकी ? म पर एक्लै बसिरहेको थिएँ । तिम्रो मीठो गीतले मलाई यता तानेर ल्यायो । तिमी असाध्यै राम्री देखिन्छ्यौ । के म तिम्रो छेेउमा बस्न सक्तिन ?"
उसको मुस्कुराहटभित्र खै के अनौठो जादु थियो कुन्नि जसले युवतीलाई लठ्ठÝ तुल्यायो ।
"तिम्रो नाम के नि ?"
"मेरो नाम प्रकृति !"
"तपाईंको नि ?"
"मेरो नाम विकास ।"
प्रकृतिको त्यो रमाइलोपनसँगै उनीहरूले निकैबेर रमाइला कुराकानी गरे । दुवै एकअर्कामा औधी आकषिर्त भए । दुवैको हृदयमा प्रेम अङ्कुरायो । प्रेमको प्रतीक रातो गुराँसको फूल टिपेर प्रकृतिले विकासलाई दिई । विकासले पनि उसको चुल्ठाको फूल निकालेर अर्को ढकमक्क रातो फूल सिउरिदियो ।
"म तिमीलाई बिहा गर्छु प्रकृति !"
प्रकृति राजी भई ।
विकास र प्रकृतिको विवाह भयो ।
उसले प्रकृतिलाई सहरमा ल्याएर भव्य महलमा भित्र्यायो र अनेक सुखसयलमा भुलायो ।
प्रकृति गर्भवती भई ।
महिना पुगेपछि उसले सन्तान जन्माई । असहृय पीडा खेपेर जन्मेको सन्तानतिर अपार खुसीका साथ उसले पुलुक्क हेरी तर उसको त्यो खुसी एकै छिनमा कहाँ हरायो कहाँ ?
त्यो शिशुका हात थिए तर औँला थिएनन् । खुट्टाहरू थिए टेक्ने पाइताला थिएनन् । आँखा थिए संसार देख्ने नानी थिएनन् ।
आफूले जन्माएको सन्तानको त्यो रूपविहीन रूप देखेर प्रकृति प्रलाप गरिरही । विकासले रमिता हेरिरहृयो ।
एकछिनमा आकाशवाणी भयो ।
"हे प्रकृति ! तैँले जन्माएको त्यो शिशु जो जन्मदै अपाङ्ग छ त्यो भित्र पनि नितान्त खोक्रो र शून्य छ । यो अब निरन्तर यसैगरी रोइरहनेछ र तँलाई पनि बाँचुञ्जेल रुवाइरहनेछ । त्यसैले यसको नाम 'प्रलाप' रहयो ।
त्यो सुनेर प्रकृति झन् भुइँमा ढलेर रुन थाली ।
विकासले प्रकृतिलाई बिस्तारै उठायो अनि नवजात शिशुलाई आफ्नो हातमा लियो र प्रकृतिको काखमा राखिदिँदै भन्यो -
"प्रकृति ! यो 'प्रलाप' तिमीलाई उपहार ।"
त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट हिँड्यो र बेपत्ता भयो ।
प्रकृतिले उसलाई कहिल्यै भेटिन ।
केही समयपछि अर्को रूप बदलेर नेपाल आयो ।
उसले नेपाली गाउँघर, तराई, पहाड सबै चहार्यो । दसैँमा गाइने मालश्री, पहेँलो जमरा र रातो टीका, तिहारको देउसी-भैलो, तीजको सङ्गनिी, बालन, रोदी, सोरठी, घाटु, मुर्चुङ्गा र बिनायो, बाँसुरी, डम्फु, मादल सहनाई, नर्सिंहा, ट्याम्को, ढोलक, झ्याम्टा आदि यी नेपाली लोकसंस्कार, चालचलन र पहिचानहरूबाट ऊ मुग्ध भयो ।
उसले रोदीमा नाच्दै गरेकी एउटी अत्यन्त सुन्दरी षोडशीलाई देख्यो जसले गर्दा उसलाई फेरि बिहा गर्ने इच्छा जाग्यो ।
अब ऊ षोडशीलाई दिनहुँजसो पछ्याउन थाल्यो
एक दिन उसले एकान्त पारेर षोडशीलाई सोध्यो-
"तिम्रो नाम के ?"
यो चिनजानको औपचारिकतापछि उसले संस्कृतिलाई प्रेमको नाटक रच्यो ।
संस्कृति मख्ख परी ।
" तिमीलाई बिहा गर्छु ।" उसले प्रस्ताव राख्यो ।
संस्कृति राजी भई ।
विकास र संस्कृतिको विवाह भयो ।
विकासले एउटा नयाँ सुविधासम्पन्न घरमा संस्कृतिलाई भित्र्यायो ।
विकासको सामीप्यमा संस्कृति निकै खुसी र सुखी रही र ऊ दोजिया पनि भई ।
निकै प्रशव पीडापछि उसले छोरी पाई । उसले निकै खुसीका साथ छोरीलाई हेरी । तर ऊ खुसी हुनुको सट्टा अचम्मित भई । किनकि त्यो नवजात शिशुको शरीरभरि दागैदाग थियो । अनुहार हेरि नसक्नुको कुरूप थियो । हात खुट्टाहरू पनि लुला-लङ्गडा थिए ।
आफूले जन्माएको सन्तानको विकृत रूप देखेर संस्कृति पीडाले छट्पटिएर रोई ।
त्यतिखेरै आकाशवाणी भयो- "हे संस्कृति ! यो तेरी छोरीको नाम 'विकृति' हो । यो विकृति रहुञ्जेल तँ कहिल्यै सुखी रहने छैनस् , तेरो अस्मिता हराउँदै जानेछ ।"
त्यसपछि विकासले बच्चालाई भुईंबाट उठायो र रगताम्मे भएकी संस्कृतिलाई दिँदै भन्यो - "संस्कृति ! यो विकृति तिमीलाई उपहार । यसलाई सम्हालेर राख ।"
त्यसपछि ऊ ढोकाबाट बाहिर निस्कियो र अलप भयो ।
संस्कृति र विकासको फेरि कहिल्यै भेट भएन ।
समृद्धि राम्री थिई ,सुवासित फूलजस्ती । मङ्सिरमा खेतका फाँटमा लटरम्म फलेर झुलेका धानका पहेँला बालाजस्ती थिई ऊ । उसको झरिलो जोवन देखेर नलठ्ठनिे को थियो होला र ?
शिरमा सुनको ताज, कानमा ढुङ्ग्री, नाकमा बुलाकी, गलामा तिलहरी, हातमा बाला र खुट्टामा पाउजु लगाएर ऊ साथीहरूसँग हाटबजार गर्थी । चाडपर्वमा नाच्थी, गाउँथी, रमाउँथी । ऊ धर्तीमा हाँस्दा आकाशमा जून फूल्थ्यो । रुँदा झरी बर्सन्थ्यो । ऊ नाच्दा मीठो लयमा कोइली गाउँथ्यो । उसले गाउँदा वनपाखामा मयूरहरू बेस्सरी नाच्थे ।
समृद्धि सधैँजसो रमाउँथी । खुसी देखिन्थी । ऊ रमाउँदा चराचर सृष्टि रम्थ्यो । वसन्त रङ्गीबिरङ्गी फूल फुलाएर उसको अगाडि टुप्लुक्क आउँथ्यो ।
विकास फेरि अर्को रूप धारण गरेर नेपाल आयो ।
यसपाला उसले समृद्धिलाई भेट्यो । समृद्धिको मोहिनी रूप र फकि्रँदो जवानीले ऊ उन्मत्त भयो ।
उसले प्रेमको नाटक मञ्चन गर्यो र आफ्नो जादुगरी व्यक्तित्वले समृद्धिलाई आकषिर्त गराएरै छोड्यो । समृद्धि उसको न्यानो र बलियो बाहुपासमा बाँधिई । अभूतपूर्व खुसीको मनोरम क्षणमा दुवैले एक-अर्कालाई सहस्र चुम्बन गरे ।
विकास र समृद्धिको विवाह भव्यरूपमा सम्पन्न भयो ।
उनीहरूको दाम्पत्य जीवन अत्यन्त रोमाञ्चित र सुखद घडीमा बित्दै थियो । यसैबीच समृद्धिले गर्भधारण गरी ।
उसको कोखबाट छोरो जन्मियो ।
प्रफुल्ल मुद्रामा उसले नवजात शिशुतिर हेरी तर एकै छिनमा आकाशका काला बादलहरूसँगै उसका चेहरामा विषाद्का धर्साहरू दौडिन थाले ।
बालक भोकले मर्न आँटेको ख्याउटेजस्तो थियो । छक्कलाग्दो कुरो जन्मदासाथ त्यो बालकका हातमा खाली कचौरो थियो र ऊ मलाई-मलाई भनेर चिच्याइरहेको थियो । समृद्धिले छाती निचोरी तर अहँ रसाएन ।
एकै छिनमा आकाशवाणी भयो - "हे समृद्धि ! तैँले जो बच्चा जन्माइस् त्यो जन्मनेबित्तिकै भिखमङ्गा बनेर जन्मिएको छ । त्यसैले यसको नाम भिखारी रहयो ।"
समृद्धि रुन थाली । त्यही बेेला त्यो भोकले चिच्याइरहेको बालकलाई विकासले हातमा उठायो र समृद्धिलाई दिँदै भन्यो- "समृद्धि ! लौ लेऊ, तिमीलाई यो 'भिखारी' उपहार ।"
यति भनेर ऊ त्यहाँबाट तुरुन्तै बेपत्ता भयो ।
त्यसपछि समृद्धि र विकासको पनि भेट भएन ।
शान्ति नदीका किनारमा प्रायः टोल्हाउने गर्थी । नीलो र कञ्चन नदीको सङ्गीतमय प्रवाहमा उसलाई बगँू-बगूँ लाग्थ्यो । त्यसको अनन्त गहिराइमा डुबेर माछाहरूसँगै खेलूँ-खेलूँ लाग्थ्यो ।
शान्ति हरिया वनहरूमा गएर रूखका डाली-डाली नाच्ने गर्थी । बुटा र पोथ्राहरूमा लुकामारी खेल्थी । हरिया चहुरहरूमा लडीबुडी गर्थी । वसन्त्ाको बेला लालीगुराँसले आफ्नो चुल्ठो सजाउने गर्थी । शरदको बेला घर-आँगनीमा बसेर मध्यरातमा सेतो टह-टह किरण धितमरुञ्जेल पिउँथी र बिहानको झुल्के घाममा आकाश छुने गरी उभिएर सेता दाँत देखाउँदै लहरै मुस्कुराइरहेका हिमालहरूको चम्किलो र सुन्दर आभासँगै ऊ प्रफुल्ल भएर मुस्कुराउने गर्थी ।
विकास फरि भेष बदलेर नेपाल आयो ।
बुद्ध जन्मेको देश, यो शान्त तपोभूमि, यी पहाडी कन्दरा, हिमाल, नदी र छहराहरू हेरेर ऊ मुग्ध हुने गर्थ्यो । आफ्नो बेचैन, अशान्त र आक्रान्त मनलाई शान्त गर्न ऊ पटक-पटक नेपाल आउने गर्थ्यो ।
एकदिन हरिया पहाडको बीचबाट छङछङ-झरझर आवाज निकालेर बग्दै गरेको सेतो झरनाको सुमधुर सङ्गीतसँगै त्यसैको छेउमा छमछम नाचिरहेकी शान्तिलाई उसले देख्यो ।
अत्यन्त रूपवती शान्ति जो निश्छल, निर्मल र बैँसले फक्रक्क फक्रेकी थिई उसलाई देखेर विकास मोहित भयो ।
विकासले शान्तिलाई प्रेमको जाल फ्याँक्यो ।
शान्ति त्यसमा परी ।
विकास र शान्तिको विवाह भयो ।
केही समयपछि शान्ति गर्भवती भई ।
उसले छोरी पाई । पीडाले थिल्थिलिएर जिउ हलुङ्गो भएपछि अतुल खुसीका साथ उसले आफ्नो सन्तानलाई हेरी तर उसको खुसी एकैछिनमा निस्तेज भयो । त्यो नवजात बालिका अत्यन्त आक्रोशित र रौद्र मुद्रामा चिच्याइरहेकी थिई । अचम्मको कुरो के थियो भने उसले जन्मदै हातमा पेस्तोलको जस्तो आकृति भएको वस्तु बोकेकी थिई ।
शान्ति डरले चिच्याउन थाली ।
विकास मुकदर्शक बनेर हेरिरहेको थियो ।
त्यही बेला अचानक आकाशवाणी भयो -
"हे शान्ति ! तँ आफू शान्ति भएर पनि जन्मदै हातमा हतियार बोकेकी डरलाग्दी बालिका जन्माइस् । त्यसको नाम अशान्ति रहनेछ । तँ अब शान्तिले बाँच्न सक्ने छैनस् ।"
विकासले बेहोसले भुइँमा ढलेकी शान्तिलाई बिस्तारै उठायो र त्यो बालिकालाई हातमा लिएर शान्तिका काखमा राखिदिँदै भन्यो -
"शान्ति ! मेरो उद्देश्य पूरा भयो । यो अशान्ति तिमीलाई उपहार ।"
यति भनेर ऊ त्यहाँबाट हिँड्यो ।
शान्तिले त्यसपछि उसलाई सपनामा समेत देखिन ।
सभ्यतालाई सारी, चोलो र पछ्यौरीले साह्रै खुल्थ्यो । गाउँले जनजीवनमा हुर्किएकी सभ्यता अत्यन्त सोझी, सरल र निश्छल थिई । दुनियाँभरका छक्का-पञ्जा, कोलाहल र रडाकोका खेलहरू न त उसले खेल्न जानेकी थिई न त देखेकी नै थिई ।
ऊ आँगनमा तुलसी रोप्थी । बारीका डिलमा सयपत्री फुलाउँथी । देउरालीमा फूल चडाउँथी । वरपीपलको चौतारीमा गीत गाउँथी । दुःखीहरूको सेवा गर्थी । परिश्रम गर्न लेकबेँसी धाउँथी । माटोमा पसिना पोखेर सुन फलाउँथी ।
सबैलाई सभ्य व्यवहार गर्ने सभ्यता सुसंस्कृत, सहनशील र सबैकी प्यारी थिई । सबैले उसलाई बत्तीस लक्षणले युक्त नारी भनेर प्रशंसा गर्थे । त्यो गाउँ जहाँ सभ्यताले पाइलो टेकी, हुर्की, बढी र जवानी भई त्यहाँ बिस्तारै अर्को लोकबाट स्वर्ग झरेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो । उसको आदर्श चरित्र, उदात्त भावना, विचार व्यवहार र गुणले ऊ सुवासित फूलझैँ मगमगाएकी थिई जसको सुवासना टाढा-टाढासम्म फैलिएको थियो ।
विकास यसपल्ट पनि आफ्नो असली रूप लुकाएर नेपाल आयो । उसका लागि यो देशको ढोका सधैँ खुला थियो । त्यसो त ऊ आफूलाई नेपाली नै हूँ भन्थ्यो ।
यसपाला उसले सारी चोलो लगाएर पछ्यौरी हावामा फर्फराउँदै गाउँको देउरालीमा फूल चढाउँदै गरेकी सभ्यतालाई भेट्यो । सभ्यताको रूप लावण्य देखेर ऊ मुग्ध भयो र उसलाई पछ्याउन थाल्यो । सुरुमा सभ्यताले उसलाई शङ्काको नजरले हेरी तर आखिरमा विकासको प्रेम जालमा ऊ फसेरै छोडी ।
एक दिन विकास र सभ्यताको विवाह धुमधामका साथ सम्पन्न भयो ।
विकासले सभ्यतालाई गाउँबाट सहरमा ल्यायो र आलीशान महलमा भित्र्यायो । केही समय उनीहरूको दाम्पत्य जीवनमा वसन्तको हरियाली छायो ।
सभ्यताले पेट बोकी ।
महिना पूरा भएपछि बालक जन्मियो ।
असहृय प्रशव पीडापछिको सन्तानलाई देख्न कुन आमालाई हतारो हँुदैन ? उसले नवजात शिशुलाई पुलुक्क हेरी । बालक राम्रो र तन्दुरुस्त देखिन्थ्यो । उसको अनुहारमा एकाएक खुसीको चमक छायो । त्यो आफ्नो प्यारो मुटुको टुक्रा जो दस महिना गर्भमा बसेर यस धर्तीमा ओर्लेको थियो त्यसलाई मुसार्न उसले आफ्ना हातहरू अघि बढाई तर त्यतिखेरै एउटा आकाशवाणी भयो-
"हे सभ्यता ! रूप र गुणले सम्पन्न भए पनि तँ यस दुनियाँकै अभागी नारी रहिछेस् । तैँले जो बालक जन्माइस् त्यो अहिले स्वस्थजस्तो देखिए पनि त्यसले तेरो गर्भैदेखि खतरनाक रोग 'एड्स' बोकेर आएको छ । यसको नाम अब 'एड्स' रहृयो ।"
सभ्यता डङरङ्ग भुईंमा ढली ।
निकैबेर बेहोस भएर बिस्तारै होस खुलेपछि विकासले उसलाई बिस्तारै उठायो र त्यो नवजात शिशुलाई हातमा लिएर उसको काखमा राखिदिँदै भन्यो -
"सभ्यता ! तिमीलाई यो 'एड्स' उपहार ।"
त्यसपछि अकस्मात् सभ्यताको आँखाबाट विकास ओझेल पर्यो- कहिल्यै नभेटिने गरी ।
damsssssssssssss lagiyo yar
अतिथि — Wed, 01/27/2010 - 15:40
damsssssssssssss lagiyo yar time pass boyo mero yata 1 ganta b4 garera padiko hahahahahaha
र त गजलकार भएँ
नारीसम्बन्धी मेरो पुरानाे काव्यबाट धारणा
प्रेयसी र म
गजल समवन्धी बहस ः अनलाइनमा फष्टाएकोे ‘विलयन गजल लेखन’ —केशु विरही
कुन देवको पूजा गर्न कुन मन्दिर जान्छौ
दुई मुक्तक (दिन्छु, दिनु)
अन्धकार फाली आऊ
पिएको मातमा पीडा बढी हुन्छन्
लुकेको क्यै कथा
उदाय् दुने शिल्पकार जातिया म्हसीका